Oghere dị na oyi akwa ozone na-akwadozi oge mbụ | Network Meteorology
A na-amata oghere na ozone oyi akwa n’ụwa niile. Mkpụrụ griin haus a na-akpọ chlorofluorocarbons (CFCs) emeela ka ikuku ozone dị na mpaghara Antarctic belata. N’afọ 1992 ka ehiwere ya Protocol nke Montreal site na nke amachibidoro anwuru nke gas ndị a.
Ruo ugbu a, oghere dị na ozone oyi kwụsịrị maka oge mbụ n'ụwa niile ma na-egosipụtakwa ihe mgbake nke mgbake, n'ihi mkpochapu nsị nke gas ndị a na-ebibi ya. Kedu ka ozone si ele ihe anya na mpaghara anyi?
1 Ozone onu Mbelata
2 Mmetụta okpomoku zuru ụwa ọnụ
Ozone onu Mbelata
Data a na-anọchite anya ihe ịga nke ọma zuru oke mgbe ị na-atụle ọnọdụ nke oyi akwa ozone n'ụwa niile. N'ihi na nso 99% nke ihe ndị na-eme ihe ozone ha akwụsịla ịbaba n'ime ikuku, oghere dị na ozone oyi akwa na-agbake. Ọ bụrụ na nke a emeghị - ọ gara n'ihu - mmụba nke ogo nke ụzarị ultraviolet, nke mbibi nke ozone oyibo kpatara, agaghị ekwekọ na ndụ.
Ọ bụ ezie na nke a bụ ozi ọma, ọ ka dịkwa mma ịhapụ nchedo gị ma gaa n'ihu na-arụ ọrụ na ụdị ihu igwe nke na-enyere aka kwụsie ike nke oyi akwa ozone.
Mmetụta okpomoku zuru ụwa ọnụ
Okpomọkụ gburugburu ụwa emeela ka ịrị elu okpomọkụ dị na mbara ala (troposphere), mana o dugawokwa na jụrụ oyi na elu oyi akwa nke ikuku (stratosphere), nke sụgharịrị ka ọ gbasie ike nke ikuku ikuku na-ekpo ọkụ ugbu site na akara kere ụwa ruo okporo osisi.
N'ihi mmụba nke ikuku a, a na-agbanyekwu oxygen n'ime ikuku elu nke ikuku nke mechara ghọọ ozone. Yabụ, mmepụta ozone dị elu. Ya mere, mgbanwe nke oyi akwa ozone ga-adabere na ike nke ikuku mgbe anyị ga-eme ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na nkwekọrịta Paris belata.
Eburu amụma banyere ihu igwe maka etiti narị afọ a bụ a "thinning" nke oyi akwa na equatorial zones na ndim karịa na mbụ dị na etiti na ịdị elu dị elu, nke ga-emetụta mpaghara Europe kpamkpam, nwere nsogbu pụrụ iche na mba Nordic.
Ebe ọ bụ na ikuku gas na-akpata mgbanwe na kemịkalụ ozone, a ghaghị igbochi anwuru nke hydrofluorocarbons (HFCs) ejiri na friji na ikuku ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oghere dị na oyi akwa ozone na-adịgidezi maka oge mbụ